Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamijkii Ileys maxaa ku dhacay.
Barnaamijkii Ileys maxaa ku dhacay.
Posted by ONA Admin	/ June 25, 2011
Mudadaii yareyd uu barnaamijka Ileys hawada ku jiray wuxuu ka kasbaday dunida daafaheeda daawadaal badanoo u oomanaa inay la socdaan laba arimood.
1- Halganka ka socda Ogadenya heerka uu marayo – gude iyo dibadba -, dhibaatada uu gumaysiga ku hayo shacabkaa, xidhiidhka uu la smaynayo halganka shacabka Ogadenya caalamka dibadda, xidhiidhka sii wanaagsanaanaya ee ka dhexeeya JWXO iyo shacabka Somaliyeed.
2- Dhibaatada ay ku hayaan guud ahaan umadda Somaliyeed gaar ahaan shacabka halgamaya ee Ogadenya maamulada uu gumaysiga Itobiya abuuray sida Kililka 5aad, midka 6aad iyo midka 7aad. In shacabka Somaliyeed la tuso oo farta loo saaro cadawtinamada uu u qabo umadda Somaliyeed iyo shirqoolada uu la maagan yahay Kaligii taliyaha Itobiya Meles Zinawi qaranimadii Somaliyeed.
Mudadii yareyd ee barnaamijka Ileys uu hawada ku jiray wuxuu si hufan u waraabiyay shacabkii u oomanaa arimahaa, wuxuuna noqday barnaamijka loogu daawasho badnaa, marka la eego mudadii uu socday iyo guud ahaan caqabadihii ku xeernaa.
Risaaladii Ileys ee saaxiiba bandan kasbatay, shaki kuma jiro in cadawgii umadda Somaaliyeed uusan farxad galin sidoo kalena qaar badanoo isqarin jiray oo tooshka Ileys uu qabtay iyagoo sii hulaalanaya godadka gumaysiga inay colaad badan u qaadeen.
Daawadayaal badan oo nala soo xidhiidhay ayaa uga shakiyay inuu cadawga ku guulaystay ugu damabyn inuu bakhtiiyo Ileys-kii u bidhaamayay shacabka. Waxaanse ugu bishaareynaynaa inaysan arintu sidaa ahayne uu jiro mashruuc ka balaadhan oo goor dhow soo gali doona hawada lagana daawan doono qaaradaha caalamka oo idil. Barnaamijkii ka socday Somali Chanell wuxuu ahaa tijaabo ku meel gaar ah, wayna fushay tijaabadii haddana waxaan u gudbaynaa marxaladii 2aad, waxaana xigi doonta marxalad kale oo 3xaad.
Shacabka S.Ogadenya wuxuu ku xaqiijinayaa himiladiisa Isku tashi iyo Mintidnimo. Waxaad sugtaanba waa Barnaamijkii Ileys iyo Marxaladiisii 2aad (Phase Two).
maansha allaah aad ayaan u soo dhawaynayana hadaan nahay umda ogadenya waxa aan dhihi karaa waa guul hadiiba uu soo laaban doono barnaamijkii ilays waxa aan leeyahay waad dadaasheen ee soo laabasha wanaagsan
insha allaah, waan sugaynaa barnamijka ilays, aadna waanu ugu oomannahay.